Home / समाचार / के ताइवानलाई लिएर आगोसँग खेलिरहेको छ भारत ?
के ताइवानलाई लिएर आगोसँग खेलिरहेको छ भारत ? 0
यही महिनाको १४ डिसेम्बरमा ताइवान र भारतबीच औद्योगिक सहयोगका विषयमा एक एमओयूमा हस्ताक्षर भएको छ।
यो सम्झौतालाई लिएर चीन र ताइवानका संचारमाध्यममा निकै चर्चा पायो। ताइवानी संचारमाध्यमले सम्झौताको प्रशंसा गर्दै सम्झौतापछि यी दुई देशबीच व्यापार र लगानी बढ्ने उल्लेख गरेका छन्।
अर्कोतर्फ चीनको सरकारी संचारमाध्यमले सो सम्झौतालाई लिएर भारतलाई चेतावनी दिएको छ। चीनको सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्सले लेखेको छ, ‘भारत ताइवानका विषयमा आगोसँग खेल्दैछ।’ ग्लोबल टाइम्सले यो सम्झौतामाथि भारतीय राजनीतिक टिप्पणीको हवाला दिँदै भारतको चर्को आलोचना गरेको छ।
ग्लोबल टाइम्सले लेखेको छ, ‘ ताइवानको विषय कुनै सरकारी स्तरको मुद्दा होइन। केही भारतीय लगातार मोदी सरकारलाई ताइवान कार्ड प्रयोग गर्न र चीन नीतिका विषयमा चीनबाट फाइदा उठाउन सुझाव दिइरहेका छन्। यो सम्झौता आर्थिक मामिला भन्दा अगाडि छ र भारत–चीन सम्बन्धकालागि खतरनाक सावित हुनसक्छ।’ ग्लोबल टाइम्स अगाडि लेख्छ, ‘ ताइवान कार्ड खेल्दै गर्दा भारतले के बिर्सिनु हुँदैन भने उ स्वयं कयौं संवेदनशील मुद्दासँग अल्झिएको छ।’
ग्लोबल टाइम्सले अगाडि लेखेको छ, ‘ भारत ताइवानबाट लगानी आकर्षित गर्न लालायित देखिएको छ। तर, ताइवानी नेता साइ इङ–वेनको राजनीतिक उद्देश्यलाई लिएर सतर्क हुनु आवश्यक छ। ताइवानी प्रशासन भारतको टेलिकम्युनिकेशन, स्टील र सूचना प्रविधिमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको छ। दुवै पक्षबीचको यो सम्बन्ध आर्थिक भन्दा पनि धेरै राजनीतिक छ।’
सो पत्रिकाले ताइवानी राष्ट्रपति साइ इङ–वेनलाई पनि चेतावनी दिएको छ। ग्लोबल टाइम्सले लेखेको छ, ‘साइ इङ–वेन खतरासँग खेलिरहेका छन्। उनी ताइवानको स्वतन्त्रताको एजेण्डामा काम गरिरहेका छन्।’
ग्लोबल टाइम्सले लेखेको छ, ‘भारतले ताइवान कार्ड प्रयोग गरेर दोकलाम विवादको बदला लिने सोचिरहेको छ भने त्यो भ्रम मात्र हो। भारतले ताइवान कार्डको प्रयोग गर्यो भने दुई देशबीच रहेको राम्रो सम्बन्ध सकिन समय लाग्दैन।’ गत हप्ता भारत र चीनबीच सीमा विवादलाई लिएर एनसएसए स्तरको बैठक सुरु भएको थियो।
ताइवान र भारतबीच भएको सम्झौतालाई लिएर ताइवान टुडेले लेखेको छ, ‘ताइपेई इकोनोमिक एण्ड कल्चरल सेन्टर (टीइसीसी) का प्रतिनिधि तियान चुङ–क्वाङले दिल्लीमा भारतीय राजनीतिककर्मी श्रीधरन मधुसुदनसँग यो सम्झौताका विषयमा हस्ताक्षर गरेका थिए। ताइवान टुडेले उक्त सम्झौताले दुई देशबीचको सम्बन्ध झन सुमधुर हुने उल्लेख गरेको छ।
टीइसीसीका अनुसार भारतसँगको सो सम्झौता ठूलो व्यापारी घरानाबाट पूर्वमा भएको २१ सम्झौताको भाग हो। ताइपेइमा १२ अक्टुबरमा दुई देशबीच औद्योगिक सहयोग सम्मेलन भएको थियो।
सरकारी तथ्यांक अनुसार भारत र ताइवानबीच व्यापारमा बढोत्तरी भएको छ। २०१७ को पहिलो नौ महिनामा दुई देशबीच ४.७ अबर डलरको व्यापारमा ४० प्रतिशतको बृद्धि भएको थियो।
यद्यपी भारत आधिकारिक रुपबाट एक चीन नीतिलाई अपनाउँदै आएको छ। एक चीन नीतिलाई स्वीकार गर्नुको अर्थ ताइवान अगल देश भएको अस्वीकार गर्नु हो। बरु ताइवान चीनकै एक भाग हो। अर्को तर्फ भारत ताइवानसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध पनि बढाइरहेको छ।
मोदीले भारतको सत्ता सम्हालेपछि भारतको विदेश नीतिको एक मुख्य दर्शन ‘लुक इस्ट’ लाई ‘ऐक्ट इस्ट’ भनिएको छ। केही विशेषज्ञहरुले भारतको मोदी सरकार ‘ऐक्ट इस्ट’ नीति अनुसार नै ताइवानसँगको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिएको बताएका छन्।
भारतले १९५० मा ताइवानसँग द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अन्त्य गर्दै पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइनलाई स्वीकार गरेको थियो। भारतले यो काम आफ्नो स्वतन्त्रता भन्दा पहिला नै गरेको थियो।
शीत युद्धका क्रममा भारत र ताइवानबीचको अनौपचारिक सम्बन्ध बिग्रिएको थियो। भारत गुतनिरपेक्ष खेमामा गएको थियो र ताइवान अमेरिकी नेतृत्व भएको खेमामा शामिल भएको थियो।
भारत र ताइवानबीच कुनै आधिकारिक रुपमा राजनीतिक सम्बन्ध नभएपनि १९९० को दशकमा दुवै पक्षबीच सम्बन्ध कामय भएको थियो।
यो परिवर्तन प्रधानमन्त्री नरसिंह रावको समयमा भएको थियो। अरु सरकारले सो सम्बन्धलाई बलियो बनाउने काम गरे। १९९५मा इण्डिया–ताइपे एओसिएशनका गठन भएको थियो।
आइटीएको गठनपछि भारत र ताइवानबीच धेरै सम्झौता भएका छन्। ती सम्झौताका कारण व्यापार र लगानीमा बृद्धि भएको छ।
जब २०१४ मा बीजेपी सरकार र नरेन्द्र मोदीको सरकार बन्यो, त्यतिबेला ताइवानले स्वागत गरेको थियो। मोदी प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भइसकेपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध झन् सुदृढ हुँदै गयो।
द डिप्लोम्याटको एक लेखमा जेफ स्मिथले लेखेका छन्, ‘ बीजेपी महासचिवका रुपमा मोदी १९९९ मा ताइवानको भ्रमणमा गएका थिए। २०११ मा गुजरातको मुख्यमन्त्रीका रुपमा मोदीले हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो ताइवानी व्यापारी प्रतिनिधिमण्डललाई स्वागत गरेका थिए।’
केही विशेषज्ञहरुले मोदी सरकार अमेरिका, अष्ट्रेलिया र जापानसँगै मिलेर ताइवानसँग आफ्नो सम्बन्ध बढाइरहेको बताएका छन्।
रबी लामिछानेलाई कतिको खतरा ? फोटो हेरेर भबिष्यबाणी गर्ने माता सबिताको सनसनीपूर्ण खुलासा…(भिडियो सहित )